Krishnap.com.np: Email गर्नुस र पैसा पाउनुस Microsoft ले तपाइलाइ पैसा दिन्छ ।
तँपाइलाइ थाहाछ अहिलेका दिनहरूमा इमेल Forward निकै चलेको त्यसको खास विषय चाँही के हुन्छ भनेनी तपाइले १० जानालाइ यो मेल पठाउनु भयो भने Microsoft ले पैसा पठाउँछ । त्यस्तै कुनै भगवानको तस्विर सहितको Mail अाउछ जसमा लेखेको हुन्छ यो Email delete गर्नु भयो भने तपाइ केहि न केहि नष्टहुन्छ भनिएको हुन्छ । अब कुरा अउछ Microsoft ले पैसा पठाउने, तपाइले विचार गर्न सक्नुहुन्छ Microsoft , msn , aol जसलेहोस email पठाउदा किन नै पैसा दिन्छ र त्यो पनि दिने भए News बन्थ्यो होला र त्यो पनि नभय जसले first मा थाहा भएको त्यो मान्छे ले पो दिने हो कि । अब यस्तो गर्ने मान्छेको नीयतको विष्लेषणा गरौ किन यस्तो गर्छन त ? यसबाट कसलाइ फाइदा हुन्छ? र तपाइ ले Forward नगर्दा के हुन्छ त ? यो सायद मैले मात्र भनेर पुग्दैन हो किन भने धेरै नै कारणा हुन सक्छ यस्तो तरिकाको विकास गर्नुमा । हुनसक्छ यसका केहि फाइदा पनिहोला तर मैले चाहि देखेको छैन । मेरो विचरमा चाहि Forward नगर्नु चाहि उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ किनभने तपाइको Email Address सबैले भेट्छन जसबाट तपाइलाइ धेरै junk mail अउने सम्भावना रहन्छ । साथै यस्तो Forward गरेर वा नगरेर तपाइको केहि हुदैन । गर्नु भनेको समयको बर्वादी र भविष्यको झन्झट बोक्नु मात्र हो ।
अब कुरा गरू फाइदाको यसबाट कसलाइ फाइदा हुन सक्छ । जसले marketing को कम गर्छ त्यस्ता लाइ email address खोज्नको लागी कुनै software company लाइ पैसा तिर्न पर्दैन किन कि त्यस्ता Mail हरू मा यतिका address हरू हुन्छ त्यो पनि प्रयोग भइ रखेको । त्यस्तै गरेर विशेष गरे Teen ager लाइ फाइदा हुन्छ केटा वा केटी email address पाउनको लागि कुनै दुखनै गर्नु परेन । त्यस्तै Spammer का लागि जसलाइ spam पठाउन कुनै दुखनै गर्नु परेन ।
त्यसैता मान्छे बानी हुन्छ दुख नगरी पैसा कसरी कमाउ भन्ने त्यसमा पनि दश विस जानालाइ email गर्दैमा पैसा अाउछ भने किन नपठाइ दिने हैन ? हुनत त्यस्ता email मा पनि मान्छे न फसेका त होइनन् नी जुनमा तपाइलाइ करोड डलरको चिट्ठा परेको छ कृपया यो यो ठेगानामा अाफ्नो बारेमा लेख्नुहोला त्यस्तै गरेर खोइ कसको हो सबै मान्छे हरू मरे रे उसको करोडौको सम्पती छ । तपाइलाइ उसको अाफ्नो मान्छे वनाएर त्यसको सम्पुर्ण पैसा अाधि गरौ भन्ने जस्ता email भेटीन्छ अब जसले सोच्न सक्छ । उसले हासेर delete गर्नु भन्दा अरू केहि नसोच्ला तर कोही चाहि केहि पैसा , नभए पनि एकछिन भने पनि समय वर्वाद चाही पकै गरीराखेको पइन्छ । तपाइ चाही के गर्नु हुन्छ । कृपया तपाइको विचार पठाउनुहोला ................................................
Posted by Krishna Pokhrel at 5:04 AM